Sahityapati - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: आऊ आमा हाइकिङ्ग गरौं
सुधन सुवेदी - आमा आऊ तिमीलाई हाइकिङ्ग बारे भन्छुछोरी मोबाइल खेलाउँदै एक कुशल शिक्षकसरी प्रस्तुत भई।बुढी आमा छोरीको नयाँ कुरा सुन्न अघि आईअनि मोबाइलमा के जाति गुगल म्याप देखाई।ब्याट हिल कहिले पुगे पो थाहा हुन्छ फतफताइकहाँ छ यो? आमाले सोधी।
लक्ष्मण अधिकारी - घर परिवारले बुझ्न सकेका थिएनन्। बेलुका ६ बजेतिर ऊ घरबाट निस्केको हुनुपर्ने परिवारको अनुमान थियो। त्यसपछि नै उसको खोजी शुरु भयो। तर भोलिपल्ट बिहान उसको मृत शरीर बालाजु बाइपास माथिको खोल्सामा भेटियो। खोज्न त साँझदेखि नै सबै लागेका हुन् तर यतातिर कसैको ध्यान गएन। उसका साथीहरु र नातेदारहरुसँग सोधपुछ भयो, जानसक्ने ठाउँमा मान्छे पठाइयो, तर घर माथिको जंगलतिर भने कसैले विचार गरेनन्। बिहान पानी भर्न आएको ट्यांकरको ड्राइभरले रातो कपडा देखेपछि पो हल्लीखल्ली भयो। जंगली जनावरले चोक्टा लुछेर विकृत बनाएको अवस्थामा बेहुलीको शव भेटियो। Comments
त्यो सधैँ मसँगै छ
बलराम अधिकारी - यो बुद्धचेत फ्रेन्च मनोविश्लेषणमा पनि उत्रेको देख्छु। मनोविश्लेषक ज्याक लकाँले जीवनलाई डिस–इज भनेछन्। लकाँसँग मेरो पूरै सहमति। अङ्ग्रेजीको डिस–इजलाई मनोविश्लेषणले दुई अर्थमा खेलाएको छ। पहिलो, डिसइज अथवा अनइज। यसको अर्थ जीवन असहज छ भन्ने हुन्छ। शारीरिक असहजता, मानसिक असहजता, दिनको असहजता, रातको असहजता। यसको दोस्रो अर्थ डिजिज अर्थात् रोग भन्ने हो। यसले जीवन रोग हो भन्छ। जहाँ जीवन, त्यहाँ रोग। हरेक असहजता सुक्ष्म रोग। हरेक असहजतामा, रोगमा अलिअलि मरणको अंश रहेको हुन्छ।
उत्तम रिमाल - हो हजुर हो
मेरा आँखा छन्
सद्धे नै छन्
दुइटा नै छन्
सबै काम ठिकसँग गर्छन्
किनकी म नेपाली हुँ।
हाम्रा नेताले नेपालीलाई भेडा सोच्दारहेछन्
म त्यस्तो लाटो पनि छैन
मैले आजभन्दा हिजोमै रमाउनू
मेरो रहर वा चाहना होइन
मेरो आज ...
भुवनहरि सिग्देल - तुरुन्तै चारजना पुलिस कोठाको अगाडि आए। साथमा अघि सानले बयान लिने पुलिस पनि थियो। एकजना पुलिसको हातमा एउटा कन्तुरजस्तो बट्टा थियो। अर्कोले कोठाको ताल्चा खोल्यो। चारैजना भित्र पसेर ढोकामा चुकुल चढाए। अघि सान गर्ने पुलिसले अवसुको कुममा हात राखेर हल्लायो। अवसु मडारिन छोड्यो। आँखा खोल्यो र हइ ई... भनेर भयानक आवाज निकाल्यो। उसको अनुहार कालभैरवको जस्तै लाग्यो क्यारे तिनलाई। झ्सक्क झ्स्के।
यो कविता मैले लेखेको होइन ...
नवराज पराजुली - यदि मैले चाहँदा कविता लेख्न सक्ने भए त म हरेक दिन कति धेरै कविता लेख्दो हुँ! हृदयमा नापेर नसकिने खालिपन छ, त्यो ठाउँ कविताले भर्दो हुँ। बाँचेर नसकेको विपना र बाँच्न नसकेको सपना लेख्न मन छ, त्यो लेख्दो हुँ। तर, कविता त उसले लेखाउने रहेछ, जसले मेरो हुनु लेख्यो। हुनुजत्तिको सुन्दर कविता अरु के नै होला र?
भोकको रामायण - ५
रामगोपाल आशुतोष - कसैले भन्न सक्छप्रेमशान्तिएकताभ्रातृत्वसहअस्तित्वबाहेकयो विश्वमा सबैभन्दा उच्चारण हुने शब्द के हो?
त्यो हो भोक!
मिरा प्रसाई - रगतको थोपा थोपा सिन्चित गरेर आफू भित्र लुकायौ शारीरिक परिवर्तनसँगै जाग्राम बसेका मातृ उमंगहरु दिन अनि महिना गन्दै नौ महिना आफ्नै शरीर भित्र राख्यौ जब तिम्रो पेट भित्र म बढ्दै जान्थे भरीएको तामाको गाग्री...
सन्तोष पौड्याल - लंके दिनभर र्याली र भाषणमा ब्यस्त रह्यो। साँझपख लखतरान परेर पार्टी कार्यलय पुग्यो। कार्यालयको वाइफाइ अटो-कनेक्ट हुनासाथ मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्न थाल्यो। उसले फेसबुक खोलेर हेर्यो। ओहो! आज त आमाको मुख हेर्ने दिन पो रहेछ। आफुसँग दिनभर सँगै हिंडेका मने, रिखे र यामेले फेसबुकमा आमाको फोटो राखेको देखेर ऊ चित खायो। उसले सोच्यो- 'कुन बेला फुर्सद पाएछन यिनेरुले? अनी कहाँको वाइफाइ पाएछन?'
सौरभ कार्की - निभाउँछु उही एस्ट्रेमा ठुटो चुरोटर, प्रश्न गर्छु आफैलाई मनभित्र एकान्तमा कतै किन चिच्याउँदैछ बच्चु कैलाश?‘टाढा टाढा जानु छ साथी, एकफेर हाँसीदेऊ’
लक्ष्मण अधिकारी - रगत छाद्ने रोगले उसका बा वितेपछि उनीहरु निकै दुखी र असहाय बने। खानै नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति बन्दै गएपछि उनीहरु सुकुम्वासी टोल छोडेर कमला नदि तटको सानो बजारको साहुकहाँ आश्रय लिन पुगेका थिए। साहुले गोरु गोठसँगै छ्वालीले बारेर आमा छोरीलाई बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। वस्न खान दिएवापत घरका भाँडाकुँडा सरसफाइ देखि सवै काम गरिदिनुपथ्र्यो। उ रोगी पनि भएकाले धेरै काम गर्न सक्तिनथी। सुखी देवी हरेक दिन आफू सरहकि सिमरनको ब्याग बोकेर नजिकैको स्कुल जाने आउने गर्थी। बुढेसकालको सन्तान भएर हो कि साहुसाहुनी सिमरनलाई असाध्य मायाँ गर्थे। स्कुल धेरै टाढा नभए पनि हरेक दिन सुखी देवीलाई ब्याग बोक्न लगाएर पठाउँथे। Comments
शम्भु सुस्केरा - कस्तो अचम्म कसैसँग सल्लाहै नगरी फालेको प्रस्तावमा कतै कुनै बिरोध नभइ समर्थन बर्सिए । सायद नेपालको इतिहासमा कुनै बैठकको कुनै प्रस्तावमा यस्तो सहमति आएको थिएन होला । साशनबाट आफैँलाई अलग्याउने आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा पुरुषहरुको सभा सहमत भएको देखेर खुशीले फुलेल मन्त्रीका आँखा निरन्तर बगिरहेका थिए । रुमालले पटकपटक आँसु पुछिरहेका उतिरै रहेको सहभागीको ध्यान खिच्दै प्रधानमन्त्री फेरि बोले –बाँकी दलका सभापतिजीहरुको प्रष्ट बिचार पाऊँ ।
नदीश - श्रीमान् गम्भीर खेलवाड भएको छ मेरो स्वास्थ्यमाथि
रजनी ढकाल - म आमा, म नारी, म सृष्टि र म आफै सिर्जना! तिमी कसरी अवमूल्यन गर्न सक्छौ मलाई? सायद गर्न कोसिस ग¥यौ र त जन्मायौ इब्सेन भएर नोराहरू। सायद अवमूल्यन ग¥यौ र त जन्मायौ कोइराला भएर इन्द्रमायाहरू, त्यसैले त जन्मायौ रिमाल भएर युवतीहरू। अब ओरियाना फलासीहरू नजन्मिएको बच्चाको नाममा, पारिजातहरू नजन्माएको छोराको नाममा आमाका हज्जारौ रूप लिएर आमा बन्न तयार छन्। तयार छन् यो सृष्टिको गिर्दो मूल्यलाई उठाउन। तिमीले अवमूल्यन गरेर के गर्छौ? तिमी आफ्नै अस्तित्वलाई मेटाउन खोज्दै छौ। आमालाई अवमूल्यन गर्नु आफैलाई हराउनु होइन र?
शिव संकल्प - मतदान सकिए पछि मध्यरातमा मतगणना प्रारम्भ भयो। मतगणनास्थलमा उम्मेद्वारलाई निषेध भनिएकाले ऊ जान पाएन। वरिष्ठ ट्याक्सीचालक रुद्रमान श्रेष्ठ उसको प्रतिनिधि बनिदिए। मतगणना सकियो। चुनावको नतीजा सार्वजनिक भयो। सन्तबहादुरले दुई मत पाएछ। रात धेरै भैसकेकाले उसलाई नजिकै घर भएका नवनिर्वाचित सदस्य बमबहादुर थापाले आफ्नो घर सुत्न लगे। पल्टिँदै उसले सोच्यो। उसले पाएको दुई भोटमा एउटा भोट त ऊ आफ्नै थियो , तर दोस्रो भोट कसको थियो? धेरै सोच्दा पनि उसले भेउ पाएन।
गिरीश गिरी - के गरौं र कसो गरौंको सोचमा अलमलकै बीच ट्राम बढिहाल्यो। मलाई त्यहाँका अन्य यात्रुले पनि सान्त्वना दिँदै ती युवक सही रहेको बताएपछि धैर्य गर्न थालेँ। त्यसमाथि अघि अठारेमा पिएको बियर र यी छेउकी सहयात्रीको लगातारको मुस्कान छँदै थियो।
रेशम विरही - बिहानपख आमाको देहान्त भयो। मैले कर्म दिने आमा पनि गुमाएँ। आमाको अन्तिम संस्कारको लागि निस्किएको शवयात्राले हामीलाई चकित बनायो। नेपालगञ्जबाट शव घरमा ल्याई नपु¥याउँदै मानिसको भीड लागिसकेको रहेछ। लगभग जिल्लाका अधिकांश राजनीतिक मानिसहरूको उपस्थिति थियो। मृत्यु पछिको यो समवेदनालाई मैले विभिन्न अर्थमा परिभाषित गर्न खोजेँ। मन वेदनाले थिलथिलो भए पनि चेतनाको एउटा हिस्सा यसको परिभाषित अर्थतिर घोत्लिन थाल्यो। Comments
घुम्टो प्रथाकी सिकार बुहारी
मुना चौधरी - घरको पुरै सदस्य एकै पटक बसेर खाना नखाने परम्परा थियो। पहिला पुरुषहरूलाई खाना खुवाउँनुपथ्र्यो। त्यसपछि मात्र स्त्रीहरू खाना खानुपथ्यो। गुहालीमा तिनओटा ओछ्यान लागेको थियो। एउटा ओछ्यानमा म सुतेँ। एउटा ओछ्यानमा बुढो सुतेको थियो र अर्को ओछ्यानमा बुढोको छोरो सुतेको थियो। स्त्रीहरू घरमा ढोका लगाएर सुतेका थिए र पुरुषहरू गुहालीमा सुत्नुपर्ने परम्परा थियो। बुढीले कुश्मालाई आफ्नो रुममा सुत्न दिएकी थिई। बुहारीले बच्चाहरूलाई लिएर अर्को रुममा सुतेकी थिई। बुढोको छोरा पनि गुहालीमा सुतेको देखेर म छक्क परेँ। ऊ सधैँ गुहालीमा सुत्दो हो भने कसरी तिनओटा बच्चा जन्मायो ?
एउटा बहुलठ्ठी यात्रा
सौरभ कार्की - जिन्दगीमा धेरै कुरा एक्कासी हुन्छ। जस्तो कि, अहिले मलाई एक्कासी भाउन्न भएर आयो। आँखै अगाडि हुनुपर्ने थियो धरहरा। तर, मैले धरहरा देखिनँ। कुद्दै गएँ त्रिपुरेश्वरपट्टिको आकाशे पुलमाथि। तर, मैले अझै धरहरा देखिन। कतै म ‘एम्लोफोबिया’को शिकार त भइन? बेतोडले कतै कुद्ने मन भयो। चुपचाप त्यहीँ ठिंग उभिने मन पनि भयो। म किंकर्तव्यबिमूढ भएँ। के गर्ने/के नगर्ने पहिल्याउन सकिन। मलाई वान्ता आउलाजस्तो भयो। आकाशे पुलबाट निस्फिक्री छाद्न पनि सकिन। म ठूलो स्वरले चिच्याउँदै कराएँ, कहाँ गयो धरहरा?’
नमन राई - मैले टेकेको माटो, मैले बोलेको भाषा
भानुभक्त - कान्छीले भनेकी थिई, ‘बाबाको स्टकोट च्यातिएको कति दिन भइसक्यो। म त बाबालाई एउटा स्टकोट किन्दिन्छु। कलेजको तीन महिनाको फिस तिरिदिन्छु। अनि पैसा बच्यो भने यो साल तीजमा लगाउन एउटा लेहंगा किन्छु। कान्छो मान्छेलाई जेठो मान्छेको जति दायित्व हुन्न नि है दिदी।’
मिलन संग्रौला - सासै फेर्दा पनि सकस हुन्छ भने बाँच्नुको के अर्थ? तर्क पनि आफ्नै किसिमको निकाल्यो कच्चा दिमागले। तिनै तर्कनामा मनलाई मच्चाउँदै डायल गरिरहेँ तिम्रो नम्बर। दर्जनौँचोटि एउटै कुरा झर्को नमानी भनिरहने त्यो महिलाको स्वर सुनेर दाह्रा किट्दै थेँ म। खालि उपलब्ध हुन सकेन। मलाई तिम्रो उपलब्धिसँग मतलब भएन अब। मात्र चाहियो, एउटै प्रश्नको उत्तर। किन चुपचाप यति निठुरी बन्यौ तिमी? कसरी बुन्न सक्यौ, त्यति सशक्त झूटो प्रेमजालो? भलै मैबाट सुरु भएको थियो, धागो बाटिन। म त त्यो कहिल्यै नचुँडिनेमा विश्वस्त थिएँ। तिमीले त त्यसलाई डल्लो पारेर एकैचोटि कता मिल्काइदियौ कता! किन?
लक्ष्मण अधिकारी - 'वास्तवमा मैले किन आफूलाई यति कमजोर र असहाय अनुभव गरेको होला - म मेहनती र इमान्दार छु, काम गर्ने शिप छ भने जीवनसँग किन हार्ने - जीवनप्रतिको दृष्टिकोण सवैको एउटै हुनुपर्छ भन्ने के छ र - म आफ्नै पाराको उन्मुक्त जीवनशैली जिउने कल्पना गर्दै निवास प्रवेश गरेँ ।
सम्पदा रिजाल - रक्सीले निल्दै गरेको मालिकको कलेजो र
उस्तै उस्तै लाग्छ...
बाकस आयो , बाकस आयो
- रश्मी रैखोला - ६ फुटे बाकस आयो
पल्लाघरे काकाले भने
हिँड जाउँ काठमाडौँ, तिम्रो बाबाको बाकस आयो
आमा त हिजै गैसकिछन्
काका -आमालाई भन्दिनू
म पुग्नुभन्दा पहिला नखोल्नु रे बाकस!
जादाखेरि बा ले भनेर गा 'थे
तिम्रा लागि बाकस भरि
आमाको लागि झोला भरि
चट्याङ मास्टर - ठूलै क्रान्तिको बिगुल फुक्छु भन्थ्यो छोरो
शिव अर्याल - ऊ बेला मुनाले आफ्ना मदनको बाटो छेक्न सकेकी थिइनन्। अहिले मदन हार खाइरहेको छ।’ अन्ततः ऊ ‘केयर गिभर’ को ट्याग भिर्दै इजरायल हान्निएकी थिई। ‘अहिलेसम्म त केही बिग्रेको छैन। यताको चिन्ता छैन। हरपल मन त्यतै डुलिरहन्छ। छोरीलाई पुरा अवधि स्तनपान गराउन सकिन। आफ्नी आमाका रसिला दुधे स्तन चुस्न आँ गरिरहेकी उसको मुखमा तितेपाती कोचिदिएँ मैले। आधारभूत बालअधिकार समेत उपभोग गर्न पाइन उसले, मेरै कारणले। डर लागिरहन्छ, मलाई भोलि के भन्ली उसले?’
लक्ष्मण अधिकारी - अव त्यसपछि मैल बोल्ने केही देखिन, मस्तिष्कमा शुन्यता छायो। तै पनि अन्तिम प्रयत्न गर्दै भनेँ, ‘हेर त्यसो नभन, म त बर्वाद हुन्छु, कसैको अगाडि मुख देखाउनलायक हुन्न, म त मरे पनि हुन्छ। तिम्रो पनि भविष्य ड्यामेज हुन्छ, के सोचेर यस्तो निर्णय गर्यौ?'
बाटो विराएको रात
सञ्जीव थापा - सहमति कोठामै बसिरहन्छे। उ तयार हुदै होली भनेर आफ्नै कामधन्दामा व्यस्त हुन्छन् आमा, भाउजू । साँझ हसिलो मुहार लिएर आइपुग्छ आग्रह। भाउजू आग्रहलाई चिया दिएर भान्सामै लाग्छिन निरन्तर। आमा सहमतिको ढोका ढकढक्याउन थाल्छिन्। निकै बेर बोलाउदा पनि ढोका खोल्दिन सहमति, न त कुनै प्रतिउत्तर नै दिन्छे। आमाको मनमा डर र शंका मडारिन थाल्छ र अतालिदै घरका सबैलाई बोलाउछिन्।
खाडीः पैसा फल्ने रूखको शहर
दीपक घिमिरे - बाध्यतामा खाडी छिरेको मलाई रहरले छिरेको जस्तो व्यवहार सबैले गर्छन्, आफन्त, साथीभाइ सबैले। मोज गरेको छस् यार भन्ने साथीभाइ र कति उतै बस्छस्, अब त आइज भन्ने घरपरिवार सबैले मेरो बाध्यता बुझ्दैनन्। अस्ति फेसबुकमा चिल्लो कारको अघिल्तिर उभिएर खिचेको एउटा फोटो पोष्टिय। दुर्गेले कमेन्ट गर्दै भन्यो– ‘वाउ हेन्सम ! मस्ती छ है।’ अनि त्यसैको तल राजुले लेख्यो– ‘लास्टै हेन्सम भएको छस्, के खान्छस् ?’